Wejigii 2-aad ee shirkii London oo Muqdisho ka furmaya – Radio Muqdisho
Waxaa maanta ka furmayaa magaalada Muqdisho wejigii labaad ee shirkii arrimaha Soomaaliya oo kol hore ka dhacay magaalada Landon ee xarunta Dalka Britain.
Shirka oo uu shir guddoomin doono Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa waxaa ka qeybgalaya madaxda dowladda Soomaaliya,kuwa dowlad goboleedyad iyo wakiilo ka kala socoda beesha caalamka.
Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Eng. C/raxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa Wakaaladda SONNA u sheegay in shirkani diiradda lagu saari doono arrimaha ammaanka iyo waxyaabihii u qabsoomey dowladda Soomaaliya.
“Wejigii labaad ee shirkii London ayaa muqdisho ka furmaya,waxaa shir guddoomin doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo,shirk waxaa uu ku saabsan yahay soo bandhigista waxyaabihii dowladda Soomaaliy auga qabsoomey waxyaabihii ka soo baxay shirkii london,waa shir islaxisaabtan,waxaana ka qeybgalayaasha beesha Caalamka,” ayuu yiri Eng Yariisow.
Dad shacab ah oo lagu layaay Gobolka Hiiraan